तीजमा पशुपतिनाथ मन्दिर लगायतका शिवालय सुनसान
शनिबार, बैशाख ०४, २०७८
सचिन परियार पढ्ने स्कुल पुग्दा भेटियो यस्तो प्रमाण, सचिनको बाबुले किन बोले झुट ? (भिडियो)
१. सचिन परियार पढ्ने स्कुल पुग्दा भेटियो यस्तो प्रमाण, सचिनको बाबुले किन बोले झुट ? (भिडियो)
५. सचिन परियार पढ्ने स्कुल पुग्दा भेटियो यस्तो प्रमाण, सचिनको बाबुले किन बोले झुट ? (भिडियो)
शुक्रबार, भदौ ०५, २०७७ मा प्रकाशित
हिन्दु नेपाली नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तीज आज महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने आजको दिन व्रत बसी शिव-पार्वतीको पूजा, उपासना गरेमा सुख, शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा तीजमा पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिरमा महादेवका श्रद्धालुहरूको भीड हुने गर्थ्यो । तर, यसपटक भने कुनै रौनक छैन । व्रतालुहरू घरमै बसेर पूजापाठ गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस सं’क्रमणको माहामारीका कारण उपत्यकामा निषेधाज्ञा गरिएको छ। सोही कारण पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिरहरू सुनसान छन् ।
सरकारले ‘चार्टर तथा उद्धार उडान’लाई पुनः सुचारु गर्ने भएको छ । बिहीबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हवाइ मार्गबाट स्वदेश आउने यात्रुका लागि मापदण्ड निर्धारण समेत गरेको छ ।
अब हवाई मार्गबाट आउनेहरुले काठमाडौं ओर्लेपछि सात दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नैपर्नेछ । कुन होटलमा बस्ने भन्ने बुकिङ गरेर मात्र आउनुपर्नेछ । यसका लागि सरकारले होटलहरुको सूची प्रकाशित गरिनेछ र होटलमा बस्दाको खर्च व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने छ ।
विदेशबाट आउनेहरुको सूची त्यस देशमा रहेको दूताबासले तोकेबमोजिम हुनेछ । एकदिनमा बढीमा तीनवटा फ्लाइटसम्म मात्रै सरकारले उडान अनुमति दिने मन्त्रिपरिषदले मापदण्ड तोकेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । यो निर्णयसँगै माग भएका ठाउँहरुको उडान तालिका बनाएर चार्टर फ्लाइट सुरु हुनेछ ।
यसअघि सोमबार कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सेन्टर (सीसीएमसी) ले चार्टर तथा उद्धार उडान राखेको थियो । त्यो निर्णयका कारण दुबई गएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान खाली नै फर्किएको थियो तर त्यही दिन टर्कीबाट र बिहीबार बंगलादेशबाट चार्टर उडान भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले तोकेका १० वटा स्थल नाकाहरुबाट स्वदेश आउने नागरिकलाई पनि सोही नाकामा रहेका होटलमा अनिवार्यरुपमा सात दिनसम्म बस्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको स्रोतले बतायो । ‘१० वटा तोकिएका स्थल नाकाहरुबाट आउनेहरुले पनि सात दिनसम्म स्थानीय होटलमा अनिवार्य रुपमा बस्नैपर्छ र कोरोना परीक्षण गराउनैपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘होटल खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने छ । नसक्नेहरुको हकमा स्थानीय समितिले व्यवस्थापन गर्नेछ ।’
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक कोरोना रोकथामकै एजेण्डामा केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा धेरै बोलेनन् । उनले सबै मन्त्रीहरुलाई आ-आफ्ना धारणाहरु राख्न समय दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठक खास गरी बढ्दो कोरोना महामारी र यसको रोकथामको विषयमा केन्द्रीत रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यसअघि सीसीएमसीले तयार पारेको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने र सरकारको निर्णयलाई एकरुपता दिनेबारे बैठकमा छलफल भएको ती मन्त्रीले बताए । बैठकले विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमार्फत घोषणा गरिएका निषेधाज्ञाको कार्यान्वयन र पालनाका लागि गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताईएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा समन्वय गर्न गहृ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एकमिटी गठन गर्ने निर्णण भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । कमिटीमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा अधिकारीहरु रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको दु:खद नि’धन भएकोमा औपचारिक रुपमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । साथै बाढीपहिरो र कोरोना लगायतका प्र’कोपबाट मृ’त्यु हुनेहरुप्रति पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ ।
२. सुत्केरी श्रीमती छोडेर श्रीमान भागे, काखमा बच्चा बोकी श्रीमान खोज्दै शहर पुगिन (भिडियो)
३. आमालाई बलात्कार गर्न लगाउछु भन्ने शर्मिला र पुण्यलाई मुद्धा हाल्छु (भिडियो सहित)
४. सपना मगरको कलिला हातले दिईन लस्करै ८ जना वेवारिसे लाई दागबत्ती (भिडियो सहित)
५. श्रीमती काटेर बोरामा हालेपछी पैसा र सुन लुट्ने श्रीमान पक्राउ (भिडियो सहित)